बैंक अफ काठमाण्डूका कार्डबाहकलाई दराजको १२.१२ योजनामा रु.२ हजारसम्मको छुट Bizshala -
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाहकहरुले दराजको १२.१२ योजनामा रु. २ हजार सम्म छुट पाउने भएका छन्।
पछिल्लो समय ग्राहकमा प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत आफूलाई आवश्यक विभिन्न समान खरिद गर्ने बानी रहेकोले बैंकले आफ्नो कार्डबाहकलाई प्रबिधिको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्नुका साथै रु. २ हजारसम्मको विशेष छुटको योजना ल्याएको हो। जसअन्तर्गत दराजको १२.१२ योजनामा बैंकको कार्डबाहकहरुले आफ्नो डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी अनलाइनको माध्यमबाट प्रिपेमेन्ट गर्दा १०% वा अधिकतम रु. २ हजारसम्मको छुटको सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन्।
बैंकको कार्डबाहकहरुले यस योजनाबाट आफूलाई आवश्यक सामान खरिद गरी अनलाइन माध्यममार्फत प्रिपेमेन्ट गर्दा बैंकको डेबिट कार्ड प्रयोग गरेमा १०% वा अधिकतम रु. १ हजारसम्म छुट र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेमा १०% वा अधिकतम रु. २ हजारसम्म छुटको पाउनेछन्। यो योजनामा बैंकको कार्डबाहकहरुले कार्डको माध्यमबाट अनलाइन भुक्तानी गरी रु. २ हजारसम्मको छुटसहित विभिन्न किसिमका अग्रणी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सामानहरु खरिद गर्न सक्नेछन्।
बैंक अफ काठमाण्डूले ९१ शाखा कार्यालय, ८४ एटीएम र १० एक्सटेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।